Pantheon: Serious WordPress na fampiantranoana Drupal miaraka amin'ny Relika Vaovao | Martech Zone
Alakamisy, Jona 23, 2016 Douglas Karr
Manana plugins mavitrika 47 amin'ny fametrahana WordPress izahay. Plugins be dia be izany, ary maro amin'izy ireo no mety hampihena ny fahombiazan'ny WordPress. Izahay dia manao fitsapana hafainganam-pandehan-javatra feno alohan'ny hametrahana plugins, na mety hampiasa lojika sasany hanavao ny lohahevitray fotsiny izahay mba hihazakazaka haingana kokoa ary tsy handoa hetra amin'ny mpizara anay. Ilaina ny hafainganam-pandeha amin'izao fotoana izao - na avy amin'ny zoro fanandramana ho an'ny mpampiasa na ny zoro fanatsarana motera fikarohana.
Raha nisy fitarainana momba ny mahazatra tranonkala fampiantranoana, izy ireo dia mazàna tsy mamela anao hamaha sy hamantatra ny fangatahana sy ny fananana ary ny fiantraikan'izy ireo amin'ny rafitra fitantanana atiny. Ny zavatra tsotsotra toa ny fandefasana ny tahiry momba ny angon-drakitrao dia afaka manapaka ny fotoana ilain'ireo pejinao entina amina ampahany. Pantheon manova an'io!
Pantheon dia sehatra fampiantranoana avo lenta ho an'ny developer WordPress sy Drupal matotra. Manome i Pantheon ekipa an-tranonkala ny fitaovana fampivoarana rehetra, fampiantranoana, fanamafisana, fampisehoana, fiasa ary automatique ilain'izy ireo hananganana tranokala tsara indrindra eto an-tany
Tantano mora ny tranokala - Tantano amin'ny takelaka tokana ny WordPress sy Drupal tranokalanao rehetra. Miaraha-miasa amin'ireo tetik'asa mora foana amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa.
Ataovy mandeha ho azy ny DevOps - Afaho amin'ny fikolokoloana mpizara ny tenanao. Avelao i Pantheon hanao automatisation sysadmin hiasa— afaka mifantoka amin'ny fampivoarana tranokala mahafinaritra ianao.
Fiasa miasa ho an'ny tena mailaka - Manosika haingana sy matetika ny fanosehana. Ampiasao ny fampidirana mitohy miaraka amin'ny fanaraha-maso ny kinova sy ny tontolo ivelan'ny-boaty, fitsapana ary tontolo iainana mivantana.
Miaraka amin'ny hery natambatra an'ny Pantheon miampy New Relic Pro, ny mpanjifanay dia manana fitaovana hananganana, handefasana ary hitantanana tranokala mahavariana, haingana sy tsy misy ahiahy, miaraka amin'ny fahombiazana faran'izay betsaka. New Relic Pro dia famenon-javatra tonga lafatra amin'ny sehatra Pantheon ary faly izahay manolotra an'ity fampandrosoana manokana sy farany ity ary Analytics suite tsy misy vidiny fanampiny ho an'ireo mpampiasa Pantheon. Zack Rosen, mpiara-manorina ary tale jeneralin'ny Pantheon
Ireo mpampiasa Pantheon dia afaka miantoka ny fahombiazan'ny tranokala fatratra mandritra ny dingana famokarana rehetra - manomboka amin'ny fampandrosoana ka hatramin'ny famoahana mivantana. Ny fampiasa fototra dia misy:
Fahitana ambaratonga kaody manome alalana ny mpampiasa hamantatra ny tena fototry ny olana amin'ny fampisehoana, hatrany amin'ny fiantsoana asa, mba hahitana diagnostika mahomby sy fikaroham-bahaolana.
Fametahana ny fananganana mamela ny mpamorona hanara-maso ny fahombiazany rehefa mandeha ny fotoana ary hamantatra haingana ireo fiasa misy olana.
Fahazoana New Relic amin'ny tontolon'ny fampandrosoana rehetra - Tontolo iainana Multidev, Dev, Test, ary Live – ahafahan'ny mpampiasa misambotra olana momba ny fampisehoana alohan'ny andehanan'izy ireo mivantana ary mametraka fahatokisana.
Ireo mpampiasa Pantheon dia hahazo fidirana amin'ny New Relic APM Pro eo noho eo ary afaka miditra amin'ny zava-bitan'ny tranonkala Analytics ao amin'ny solaitrabe ny sehatr'asa Pantheon.
Tags: mailakafanaparitahana kaodydrupalfampandrosoana drupalNew Relicrelika vaovao proPantheonfitantanana tranokalaWordPressfampivoarana ny wordpressWordPress hostingfampisehoana wordpress
Marketing amin'ny Affiliate sy ny fanarahan-dalàna CAN-SPAM